Tenga Magetsi otomatiki Munyu & Pepper Grinder Set - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Magetsi otomatiki Munyu & Pepper Grinder Set
$29.99 Regular price $57.99
ruvara mukuyi 2pc-Q mukuyi 1pc-W mukuyi 1pc-Q mukuyi uye Base-W mukuyi 2pc-W mukuyi uye Base-Q
mukuyi 2pc-Q mukuyi 1pc-W mukuyi 1pc-Q mukuyi uye Base-W mukuyi 2pc-W mukuyi uye Base-Q
Magetsi otomatiki Munyu & Pepper Grinder Set - kukuya 2pc-Q yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Purogiramu Type: PP
Muenzaniso Nhamba: 76231
Zita: Magetsi Grinder
Item Zita: Magetsi Munyu Pepper Grinder Mill
Chishongedzo: ABS + Stainless Simbi
Kurema kweNet: 210g / 240g
Kushanda: Kukuya mhiripiri, Rice, Gorosi
Inokodzera Chiitiko: Makicheni, Restaurant kumashure makicheni, Picnics, Barbecues, nezvimwe.
Chinyorwa: Iyo yekukuya mhiripiti yakagadzirwa nesimbi isina simbi uye ABS mapurasitiki, isina ngura uye isina kupisa ngura, haizokanganisa iko kunhuwirira kwenzvimbo dzezvinonhuwira.
Bhatiri: Yekare Vhezheni inoda 4 AA mabhatiri uye iyo Yakagadziridzwa vhezheni inoda 6 (isina kuiswa mupakeji)
Base yedu inogadzirwa neepamusoro-giredhi huni uye zvinhu zvesimbi, ngura-chiratidzo uye yakasimba, kwete chete inogona kunyatso gadzira yako pepper grinder, asi zvakare inogona kushandiswa seye rakaisvonaka kicheni kushongedza
Kugadziridza makoji: Ingochinjisa kuoma kwezvinonhuwira zvako kubva pakanaka kana pakaomarara.
Yakagadziriswa dhizaini: Isina waya isina bhatiri-inoshandiswa dhizaini inoita kuti zvive nyore kutenderedzwa.
Leak proof: Inouya nevhavha iyo inogona kuchengeta yako petafura yakachena.
Nyore kushandisa: One-ruoko oparesheni, nyore kudzvanya bhatani.
Nyore kuchenesa: Zvipenga zvikamu zvinogona kucheneswa nyore.
Usanyura pasi pemvura kana zvimwe zvinwiwa.
Munyu, mhiripiri uye mabhatiri asina kuiswa.
Ndokumbira utendere 1-3mm misiyano nekuda kwechiyero chebhuku, ndatenda!
Nekuda kwemusiyano uripo pakati pevatariri vakasiyana, ndokumbira unzwisise kuti pikicha yacho inogona kusaratidza iro chairo ruvara rwechinhu.
Kubva paongororo dze 75
Yakasvika nekukasira uye yakazara zvakanaka. Chigadzirwa chakakura uye mhando yakanaka.
Nyatso shanda, hapana mabhatiri anosanganisirwa, zvidimbu zvitanhatu chimwe nechimwe ..
Inonakidza kubata. Inoda 4 AA mabhatiri. Akaenda kuUkraine kwenguva yakareba. Yakarongedzwa zvakanaka. Ini ndichawedzera pikicha
Yakasvika nekukurumidza kwazvo, yakarongedzwa zvakanaka… senge foto chigadzirwa chakanaka. Zvakadaro hazvina kuravira asi zvinoratidza zvakanaka kwazvo
Inotaridzika yakakura, inorema muruoko, yakagadzirwa zvine mutsindo. Inofambiswa nematanhatu AAA mabhatiri.